Sadukiinta iyo khuraafaadka - Rabbi Michael Avraham
Sadukiinta iyo khuraafaadka
Jawaabta > Qaybta: Iimaanka > Sadukiinta iyo khuraafaadka
Hello Yuusuf Waxaa la weydiiyay 2 sano ka hor
Maskaxdoodu waxay keentay in aanay aqbalin tilmaamaha xikmadaha oo ay inkiraan Toshav'a ilaa xad [oo aan si fiican u aqoon waxa dhabta ah ee jira]
Mabda’ii iyaga hagayey miyaanu ahayn mabda’a ku hagaya?
Tilmaamaha Farrisiinta ee ku saabsan Sadukiinta dhab ahaantii ma khalad xigmadeed oo kale baa xagga fahamkaaga?
Oo maxaa Talmuudka lagugu kufsaday [sabab jirta, taas oo aanan hadda awoodin inaan istaago]
Waa maxay sababta caqliga saliimka ahi inoo sheegayo in aanay dhibaato ku jirin in aad shidto qaboojiyaha Sabtida, ama biyo karkaraya oo bunka lagu shido
Isku soo wada duuboo Talmuud iyo garqaadayaasha hortooda, waxaan dareemayaa nooc ka mid ah "wareeg" waxa haa iyo waxa aan ahayn, iyo maxay tahay sababta farqiga u dhexeeya.
Waxaan rajeynayaa inaan nafteyda u sharraxay, sababtoo ah runtii aad ayaan uga xishooday wixii laygu soo bandhigay maqaalladaada
Haddii mabda'a iyaga hagayey uu ahaa waxa i haga markaa anigu waxaan ahay Sadukiin iyo Beytusi. Haddii aad hayso su'aal gaar ah, fadlan halkan ku diyaari oo si faahfaahsan ugala hadal.
Hello Yuusuf Waxay ku jawaabtay 2 sano ka hor
Ma odhan waxaad tahay Sadukiin.
1. Waxaan idhi ilaa maanta waxay ila tahay in habkan oo kale uu yahay hab-dhaqanka Sadukiinta, la’aanta ra’yiga/sharciga/maamulka oo ay jiilba jiil u gudbiyaan akhlaaqda Tawreed iyada oo aan daliil loo hayn [ nooc ka mid ah waxa Hillel ku yidhi Ger oo doonayay inuu barto Sixirka]
2. Waxa ay iila muuqataa in aad tahay qof asal ah oo macnawi ah, iwm
Iyo sidaan midi af badan ku goyn karno maxaa dhaqanku ka aqbalay iyo wixii kale
Marka la soo koobo, sidaad u gooysay maamulka koowaad ee dhaqanka, sidaas darteed Sadukiintu waxay ku gooyeen Farrisiintii dhaqanka.
Sideen ku ogaan karnaa inay Farrisiintu wax saxnaayeen?
Ma waxaan haysanaa caddaynta xaqnimada Farrisiinta mise waxaan ku khamaarnaa?
ק Waxay ku jawaabtay 2 sano ka hor
Kamilta Debdihuta waa in ay wax ka beddeshaa geliddaada Wikipedia oo ay sheegtaa in aad caddaynayso in aad tahay Sadukeen iyo Beitusi.
AP oo berigaa kula doodaayey nin rabbaan ah oo ku saabsan Rabbi Shlita, waxaanan filayaa inuu igu doodaa inta aad tiraahdo ma jirto wax awood ah oo ku saabsan arrimaha fekerka ee abtirsiinta, markaa xitaa haddii aad wada gaartay dhammaan. saddex iyo toban mabda'a naftada waxba kuma jiraan. Sababtoo ah qayb muhiim ah oo ka mid ah fikradda saddex iyo tobanka mabaadi'da waa dhaqan. Oo fahan in kuwa kale aysan aniga iga caqli yarayn...
Ka hadli maayo haba yaraatee dhaqanka iyo rabbaaniga midna, kuma mashquulsana qaybinta darajooyinka, waxaan ku mashquulsanahay qeexitaanno.
Waxaan isku dayaa inaan fahmo farqiga u dhexeeya [haddii uu jiro] hab-dhaqankiisa iyo hab-dhaqanka Sadukiinta [macluumaadka yar ee aan iyaga ka hayo haba yaraatee]
Ma wax run ah oo soo kordhaya oo qayb ka ah gudbinta Tawreed ee qarniyada ka mid ah dadka akhlaaqda ah ee Tawreed [oo aynaan ka hadlayn xaqiiqooyinka sayniska dabcan] ayaa igu waajibiya, mise maya, ma jiraan amar "rasmi ah" oo ay abuurtay. akhlaaqda Tawreed ilaa ab ka ab
Waxaan la yaabanahay sidaan dhab ahaan u aqbali karo xataa Tawreed qoran, maadaama ay sidoo kale bixiyeen kuwa aanan aqbalin amarkooda
Ma odhan ma waxaad tidhi waxaan ahay Sadukiin. Waxa aan idhi doodda ah in aan Saduq ahay iyo in kale waxba iima aha. Su’aashu waxay tahay maxaa xaq ah ee ma aha waxa cinwaanka mudan.
Waxa lagu soo gudbiyo farriinta Siinay ama hay'ad u qalma (Sanhedrin) waa sax, wax kasta oo kale xitaa haddii lagu keeno dhaqan ma jiraan. Aad u fudud. Mar walba ma fududa waxa ka yimid Siinaay ama hay’ad tayo leh iyo waxa aan samaynin, balse waa dood u baahan in arrin kasta lagu qabto dantiisa.
Illeen wax xujo ah laguma hayo waxa lagu abuuray dhaqanka faca. Dhab ahaantii maya. Waxay leedahay xoogaa miisaan ah, waxaana jira sharciyo kastam. waa taas. Ilaah kaliya ama hay'ad u qalma ayaa awood leh. By habka, tani maahan wax igu cusub. Kani waa xeerkii ay ku heshiiyeen badi garsoorayaasha. Laakiin marmar waxay u muuqdaan inay iska indhatiraan.
Adiga iyo K. (iyo sidoo kale rabbaaniga uu soo xigtay) kaliya ma fahmin sheegashadayda. Murankaygu waa in fikrad ahaan aysan jirin wax awood ah oo ku saabsan arrimaha dhabta ah. Xagga xaqiiqooyinka, dhibna ma laha in cilmi ahaan iyo in kale (xitaa imaatinka Masiixa ama bixinta gaarka ah waa xaqiiqo) waxa suurtogal ah waa in la iga dhaadhiciyo in taasi run tahay oo aan la ii sheegan maamul la xaqiijiyay. Waayo, haddaan la igu qancin maxaa ka faa'iiday inay ii sheegaan in xilkaas oo kale uu yahay bidco?! waa taas. Aad u fudud oo cad, oo qof kasta oo taas diiddan waa uun wareer.
Waxa ay iila muuqataa in aan arrintan aad u fahmay, markaas ayaan waydiiyay
Waxaan si faahfaahsan u sharxi doonaa, sidee baa hortaada xitaa hal tirokoob oo aad u hesho sida saxda ah? Tusaale ahaan nidaamka salaadda
Miyaydnaan isku hallayn kuwa aan talada lahayn?
Michi Waxay ku jawaabtay 2 sano ka hor
Waxaan ka hadlay xaqiiqooyin. Halkaan waxaa ka jira wada hadal dhegoolaha
Markaad runta sheegto, ma waxaad ula jeedaa caddayn?
Yacni, waxaad aqbashaa waxa lagu bixiyo marag ahaan, laakiin ma aqbalin waxa lagu bixiyo "is-aamin"?
sidaas ayaan u fahmay si kastaba
Oo halkan waan ka xishooday
Dhammaan khudbadaha xikmadaha ee aayadaha ka soo baxay ma aha marag ma doon ee waa "aragti nafeed", sida la moodo.
Haddii la yiraahdo Chazal waa maamul, waa Manlaan, miyaanay ahayn is-aragtida akhlaaqda Tawreed waagaas ilaa maanta?
Waxaan soo jeedinayaa in aan halkan ku dhameyno. Waxaad ku adkeyneysaa markaad garan weydo waxay ku saabsan tahay.
Haddii ay jiraan wax gaar ah oo aan qoray oo ay kula muuqato inaadan fahmin, fadlan si cad u qor (oo ay ku jirto isha) oo aan ka doodno. Waxaan weydiiyaa iyadoon hadallo guud oo ku saabsan habkayga ay caddahay inaadan garanayn.